Induction Brazing Brass Tube ku-Brass Disk Process kanye Nezicelo
Ikhaya / Izicelo / Induction Brazing / Induction Brazing Brass Tube eya ku-Brass Disk
Isigaba: Induction Brazing Tags: ishubhu lethusi, ithubhu yethusi yethusi yethusi, ithusi elicwebezelayo, ishubhu yethusi yethusi yethusi, ishubhu yethusi yethusi ku-disk, thenga umshini wethusi we-induction, ithubhu yethusi yethusi eliphakeme kakhulu, lokungeniswa zethusi tube, ipayipi lethusi lokuthunga lokungeniswa, induction bronze zethusi kudiski, intengo yomshini wokukhwabanisa, tube
I-High Frequency Induction Brazing Brass Tube eya ku-Brass Disk Izicelo
Ikhasimende lidinga ukugoba isiliva isiqu sethusi kumaka wesikhumbuzo sethusi.
- Isebenzisa i-Silver Solder ye-Brazing Alloy, ne-Stay Silv flux
- Inqubo yamanje isebenzisa ithoshi, ethatha imizuzu engu-2-3 ngocezu ngalunye.
I-DW-HF-15kw heater yokufaka induction
• Izinto eziyisampula zombili ziyithusi. Ishubhu lesikhungo - .500 ”(12.7mm) OD (0.0605” (1.537mm) ukushuba kodonga) x 2.9 / 3 ”(73.66mm) ukuphakama
• Ipuleti lomaka - 3.6 ”(91.44mm) OD x 0.125” (3.175mm) awugqinsi (aqanjiwe) aluhlaza kancane.
Ingxubevange - iSil Fos rod- 0.125 ”(3.175mm) x 0.050” (1.27mm)
Ukushisa: 1475-1500 ° F (801-815 ° C)
Isikhathi: imizuzwana ye-45
Izinqubo ze Ukukhishwa kwesibalo:
Ukukhombisa ukuqedwa “kokuphakelwa ngesandla” ingxubevange (okujwayele ukwenziwa lapho kubanjwa isibani), sakhe ingxubevange yekhasimende ibe yiringi ezolingana kahle phezu kwephubhu yeposi. Le ndlela inika izinzuzo eziningana ekusebenzeni komkhiqizo: ngokukhanyisa ithoshi. Izindandatho ze-pre-form alloy zinganikezwa ngumhlinzeki we-alloy ukuze alingane kahle i-tube OD.
Siguqule ithubhu nendawo yokumatanisa kupuleti lomaka nge-Stay Silv whit flu ehlinzekiwe futhi sathuthela indandatho engaphambi kokuklanywa phansi kwephubhu ukuze sixhumane nobabili ne-tube kanye nomaka ngokususelwa kusimo se-interface sabo.
Ikhoyili yesigaba / yobubanzi obabili yakhelwe ukushisa ngokufana ithubhu nepuleti kuye cishe ku-1500 0F kusixhumi esibonakalayo sezingxenye - lapho izinga lokushisa laliyogeleza ingxubevange yafinyelelwa, izindandatho ezazenziwe ngaphambili zazizungeza ithubhu nomaka wagcwala ukwakha gcwalisa i-braze filet. Ukufaka isicelo kwavunyelwa ukuba kuqiniswe, umhlangano wabe usukhishwa ngaphandle kwekhoyili wafakwa ebhavini lamanzi ukuze ususe okusele okusalile.
Izinzuzo Ukukhishwa kwesibalo:
Induction Brazing Steel Stainless To Brass